Ụlọ ọrụ na -emepụta kapeeti ngwaahịa - China Stock Carpet Tile Manufacturers, Suppliers
Mpekere kapeeti nwere ọdụ azụ azụ-Agba
Isi ụcha bụ teknụzụ jacquard kachasị ọhụrụ na taịl kapeeti. Tụnyere usoro usoro ahịrị ọdịnala, kapeeti na -acha agba nwere mmetụta 3D ka mma yana mgbanwe dị iche iche na agba. Ọnụ ego agba agba na -adịkarị elu, a na -enyekarị ya maka nnukwu ọrụ. Usoro ngwaahịa anyị bidoro na-eji yarn a na-emeso n'ụzọ pụrụ iche na kwushin pụrụ iche azụ, nke ga-ewetara gị ogo dị elu ọnụ ahịa dị mma karịa. Usoro isiokwu a dabara ọ bụghị naanị maka azụmaahịa kamakwa maka ebe obibi.
Nylon na -efegharị na PVC azụ 668
A na -emepụta kapeeti JFLOOR Flocking® site na iji teknụzụ High Voltage Electrostatic Flocking ma bụrụ nke nylon siri ike 6.6, nke na -akwụdo na ntọala ala. Enwere ihe karịrị nde 80 nde kwa square mita, okpukpu iri karịa kapeeti siri ike. Ọ na-enweta ntụpọ dị ịrịba ama na nkwụsi ike nke ala, dị mfe ihicha yana nnagide mara mma.
Ihe eserese PP nwere PVC azụ-Adventure SQ
Adventure Series bụ usoro izizi nke taịlị PVC eserese. Nhọrọ ngwaahịa anyị sitere na usoro izizi ama ama kemgbe ọtụtụ afọ n'ụwa niile, yabụ ọ dabara nke ọma. Ala dị okirikiri na nkwado dị nro na -enweghị mgbawa bụ isi ihe anyị chọrọ maka ngwaahịa a.
1. Usoro klaasị otu na -abịa na njiri mara mma nke ukwuu na agba agba.
2. Ngwa ahịa anyị mgbe niile bụ 1500sqm kwa agba. Maka oke ego adịghị, oge nnyefe bụ ụbọchị 20.
Ihe eserese PP nwere azụ azụ-Starlet SQ
1. Usoro Starlet bụ usoro Graphic tiles kapeeti nwere nkwado PVC. Site n'iji nnukwu triangle ahụ, ọ na -emebi mmetụta ahịrị ọdịnala nke taịlị kapet. Onye ahịa ahụ ka nwere ike nweta mmetụta nrụpụta ala pụrụ iche n'ime mmefu ego ya. Ọdịmma ya dịkwa n'ọkwa dị elu, yana akwa dị elu na nkwado dị nro na -enweghị mgbawa.
2. Ngwa ahịa anyị mgbe niile bụ 1000sqm kwa agba. Maka oke ego adịghị, oge nnyefe bụ ụbọchị 20.
1. Usoro Traza bụ usoro eserese teepu kapeeti na nkwado PVC. Site na ahịrị mara mma agbakwunyere na nhazi na agba ọdịnala, ọ na -ejikọ ọdịnala na ejiji nke ọma. Ọdịmma ya dịkwa n'ọkwa dị elu, yana akwa dị elu na nkwado dị nro na -enweghị mgbawa.
Ihe eserese PP nwere PVC azụ-Vitality SQ
1. Usoro dị mkpa bụ usoro ihe osise taịlị kapet nwere nkwado PVC. Nhazi ahụ na -ewere ụdị egwu okike, yabụ ahịrị ndị ahụ yiri oke ọhịa, okwute ma ọ bụ ịkpa akwa. Mpekere anọ na -emegharị nwere ike ime ka mmetụta ikpeazụ bụrụ ihe okike na imepụta ihe. Ọdịmma ya dịkwa na ọkwa dị elu, yana akwa dị elu yana nkwado dị nro na -enweghị mgbawa.
Ihe eserese PP nwere oghere azụ azụ nke PVC SQ
1. Usoro mkpali bụ usoro izizi nke taịlị PVC eserese. Nhọrọ ngwaahịa anyị sitere na usoro izizi ama ama kemgbe ọtụtụ afọ n'ụwa niile, yabụ ọ dabara nke ọma. Ala dị okirikiri na nkwado dị nro na -enweghị mgbawa bụ isi ihe anyị chọrọ maka ngwaahịa a.
Loop Level Loop nwere bitumen azụ-Murah SQ
1. Usoro Murah bụ usoro nkwalite dabere na usoro ọkwa ntinye. Site na iji ụdị ejiji, ọ nwere obere ihe na -achọ n'ụzọ nrụnye. Ntinye na ụzọ enweghị usoro ka ga -egosipụta mmetụta ekwekọghị ekwekọ. Ọdịmma ya dịkwa n'ọkwa dị elu, yana akwa dị elu na nkwado dị nro na -enweghị mgbawa.
2. Ngwa ahịa anyị mgbe niile bụ 1500sqm.
PP ọkwa loop na bitumen azụ-egwurugwu SQ
1. Usoro egwurugwu bụ usoro nkwalite dabere na usoro ọkwa ntinye. N'inwe ụdị ọgbara ọhụrụ, pc ọ bụla nwere mmetụta gradation, yabụ onye ahịa nwere ike wụnye ya na usoro ọ masịrị ya ka ọ wee nwee mmetụta ọsọ ọsọ. Ọdịdị ahụ ka dị n'ọkwa dị elu, yana oke elu na nkwado dị nro na -enweghị mgbawa.
Ụdị ọkwa ọkwa PP nwere bitumen azụ-Element SQ
1. Usoro mmewere bụ ọkwa ntinye maka ngwaahịa ngwaahịa JFLOOR. Enwere agba anọ dị mkpa yana ha niile bụ taịl PP nwere nkwado bitumen. Ọ bụ ezie na ọ bụ ọkwa mbata, ogo ya ka dị n'ọkwa dị elu, nwere nnukwu ala na nkwado dị nro na -enweghị mgbawa. Ọ bụrụ na ịmegharị otu ụzọ n'ụzọ anọ, ọ ga -egosipụta mmetụta agba 8.